नेपाली साकिराले लभ म्यारिज गर्ने सपना भए पनि प्रेमी पाउन गाह्रो भो! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > नेपाली साकिराले लभ म्यारिज गर्ने सपना भए पनि प्रेमी पाउन गाह्रो भो!
admin June 5, 2020 June 5, 2020 जीवनशैली, मनोरञ्जन 0
कारण, उनी अग्लो केटासँग हातमा हात वाँधेर हिल जुत्ता लगाएर हिड्न चाहन्छिन् । प्रेम गर्ने मानिसको खोजी गर्ने यी सुन्दरी केटासँग नजिक हुन भने नसक्ने बताउँछिन् । स्कुल पढ्दा उनले कुइनाले हिर्काउने केटा खुबै कुटेकी छिन् । यो क्रम काठमाण्डौ आएपछि पनि नरोकिएको इन्दिरा भन्छिन् ।
गायिका एलिना चौहानलाई प्रेम प्रस्तावको ओइरो आउन थालेपछि यस्तो भन्छिन् (भिडियोमै हेर्नुस्)
रातमा बारम्बार निन्द्राबाट बिउँझने मानिसहरुलाई असामायिक मृ त्यु हुने संकेत